ဝါးခယ်မ : အံ့ကျော်ကုန်း တိုက်ပွဲ နှင်. သူသိသော ဒုတိယဗိုလ်မှုးကြီးအံ့ကျော်
အံ့ကျော်ကုန်း တိုက်ပွဲ နှင်. သူသိသော ဒုတိယဗိုလ်မှုးကြီးအံ့ကျော်
အိတ်ကို ပခုံးကချပြီးစမ်းရေတွေကိုလက်ခုတ်နဲ့သောက်လိုက်တယ်။၁၀ မိနစ်နားတဲ့အချိန်မှာရေဗူးထဲရေဖြည့်လိုက်တယ်။ထီးချရားရွာဟောင်းဘေးကစွယ်တော်ပင်တန်းတွေမြင်
ကျွန်တော်ရဲ့ချွေးတွေနဲ့ ရွှဲစိုလို့ပေါ့ကျောပိုးအိတ်ထဲမှာတော့ဝါးခယ်မခွင့်ပြန်စဉ် အမေပေးလိုက်တဲ့ မုန့်
ဆမ်းထုပ်လေးရှိနေတယ်။အင်း ။ ဒီမဲသဝေါ စခန်းတိုက်ပြီးရင်အသက်နှင့် ခန္ဓာ အိုးစားကွဲလေမလား မသိဘူးလို့ပြုံးပြီးကာဘိုင်သေနတ်ကိုခပ်တင်းတင်းလေးဆုပ်ကိုင်လိုက်တယ်။
ပိုင့် ၁၀၀၀ကုန်းက Tactical Command နည်းဗျူဟာကွပ်ကဲမှုနေရာ ဖြစ်ပြီးအဘလှ(ထိုစဉ်က
ဗိုလ်မှုးကြီးမောင်လှ) ကွပ်ကဲပြီးအမြောက်စခန်းရှိပါတယ်။KNU မဲသဝေါ စခန်းကိုကျောက်တောင်တွေဖက်တွယ်တက်ရင်းကျွန်တော်တို့တပ်ကဖြေးဖြေးကပ်နေတဲ့အချိန်အေ
မြာက်စခန်းကပစ်ကူပေးတယ်။ရန်သူစခန်းမရောက်ခင်ကျွန်တော်တို့ ခမရ(၂) တပ်ရင်းမှုးအမိန့်ကိုပြန်သတိရမိတယ်။
''ငါတို့ ခမရ(၂)တပ်ရင်းက ဒီနေ့
မဲသဝေါ စခန်းကို အပြီးတိုင်တိုက်ခိုက်ခြေမှုန်းရမယ်။့
မင်းတို့ အရာရှိ စစ်သည်တွေ ရဲ့
ရှိတယ်။အမိန့်ကိုအားလုံးရှင်းလား ”မေးတော့ အားလုံးက***့ ရှင်းလင်းကြောင်းပြန်ဖြေကြတယ်။
တပ်ရင်းမှုး ဒုတိယဗိုလ်မှုးကြီးအံ့ကျော်ကပြတ်သားစွာအမိန့် ပေးလေပြီ။
စစ်ဆင်ရေးအမည် ရန်ငြိမ်းအောင် လို့ အထက်က ပေးထားတယ်။ရှေ့ကကျောက်တောင်ကုန်းကရန်သူစက်လတ်ကမနားတမ်းပစ်နေတယ်။ ရဲဘော်တွေ အရာရှိတွေလည်းထိခိုက်ကျဆုံးကုန်ပြီ။ မြေပြင်အနေအထားအရမဲသဝေါရဲ့အချက်အခြာမြေ
(critical terrain) ဖြစ်နေတယ်။အဲဒီနေရာကိုသိမ်းပိုက်ရင်မဲသဝေါ ကတိုက်လို့ ရပြီ။ ဗက မြင့်အောင်
ကစစ်ရေးသုံးသပ်ပြီးသူ့ တပ်ခွဲ က ဆရာစိုင်းရွှေအောင်ကို BA 84 ကားဂူးစတပ် ပခုံးထမ်းလောင်ချာနဲ့ပစ်တော့ရန်သူ over head cover ခေါင်ကတုတ်ပြိုသွားတယ်။
''ဟေ့ခွဲ(၁) ကွ။ ခွဲ (၅) ကွ။ ခမရ(၂)
ကွ ။ခွဲ(၂) ခွဲ(၄) ချကွ
ယ်။KNU စခန်းထဲက မှောင်ခိုဈေးတန်းနဲ့ကား ၃၂ စီးကျန်ခဲ့တယ်။ လက်နက်ခဲယမ်းတွေ အမြောက်အများသိမ်းမိတယ်။မဲသဝေါ ပြန့် နားကတောင်ကုန်းကို''အံ့ကျော်ကုန်း'' လို့ အထက်ဌာန
ကဂုဏ်ပြုတဲ့ အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ တပ်ရင်းမှုးအမည်မှည့်ခေါ်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။
မဲသဝေါ စခန်းတိုက်ပြီးတော့ တပ်မမှုး ဗိုလ်မှုးကြီးမြင့်အောင်ကဂုဏ်ပြုပွဲ ကိုဘားအံ မှာခန်းနားစွာလုပ်ပေးတယ်။တပ်မ စည်းဝေး ခန်းထဲမှာနောက်ထပ်ရည်မှန်းချက်အသစ်ထပ်ပေးတယ်။ KNU မော်ဖိုးကေ စခန်းကိုထပ်တိုက်ဘို့စစ်ဆင်ရေးအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်။ ချေမှုန်းရေ့း
ကကျွန်တော်တပ်ကိုတာဝန်ပေးတယ်။နောက် ၂ ရက်မှာ ကုလားမတောင်က မော်ဖိုးကေ ချီတက်ရတယ်။ပွိုင့် ၁၀၁၄ တောင်ကုန်းမှာဗျူဟာမှုးအမိန့် နာခံ။ရန်သူနောက်ဆုံးသတင်းနဲ့
ကျွန်းတွေရှိနေတယ်။ဒါကို ထိုင်းဘက် ကလက်နက်ငယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ ကိုစပစ်တယ်။
မော်ဖိုးကေ စခန်းက ရန်သူကလည်းကျွန်တော်တို့ပစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကလည်း
ပြန်ပစ်ပြီး မော်ဖိုးကေစခန်းထဲကို၂ကြိမ်ဝင်လုံးတယ်။ သူတို့ ကပစ်ကတုတ်ထဲက ပစ်လို့ စစ်သည်တွေကျတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဘေးနံက ခမရ(၆)ကအဲဒီနေ့ မှာအရာရှိစစ်သည် ၄၀ကျော်ကျတယ်။ ကျွန်တော်တပ် ကလည်း၁၀ယောက်ကျနေပြီ။ယိုးဒယားတင့်ကား ၂စီး ဝင်လာလို့
လောင်ချာနဲ့ ပစ်တော့ တင့်ကားပျက်ပြီးထိုင်းစစ်သားတွေထွက်ပြေးသွားတယ်။
ခမရ (၅) ကစစ်ကူလာပေါင်းပြီးအထက်က ကျွန်တော်တို့ ကို နှစ်နိုင်ငံပြသနာဖြစ်မှာစိုးရိမ်ပြီးခွါစစ်
နိုင်ငံတော်က၂၀-၈ - ၁၉၈၄ မှာအင်္ဂလန်ကိုဆေးကုစေခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်မှုးကြီးကျန်းမာလာတော့
ကျွန်တော်က ဝါးခယ်မသား ဆရာမကြီးဒေါ်ပိုက်မိ တပည့်မှန်းသူသိသွားတော့ ကျွန်တော်ကိုဆူတယ်။ဆရာမကြီးကသူ့ ကိုငယ်စဉ်ကစောင့်ရှောက်ခဲ့တာလ်ို့ပြောတယ်။
အငြိမ်းစားယူတော့ညွှန်ချုပ်တာဝန်ယူခဲ့တယ်။လှိုင်သာယာ။ရွှေပြည်သာ။ဒဂုံဝေဘာဂီ တွေ နဲ့ စက်မှုဇုံတွေက ဆရာ့ရဲ့ပုံရိပ်တွေပေါ့။
၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာ ကျွန်တော်က နတခစစ်ဗျူဟာမှုး ရာထူးးနဲ့ ဝါးခယ်မမြို့မှာ ဆရာရဲ့အလှူ အတွက် VIPလုံခြုံရေးယူရတယ်။ကမ်းနားလမ်းကပန်းခြံလဘက်ရည်ဆိုင်မှာစကားတွေအများကြီးပြောဖြစ်တယ်။
အဲဒီနေ့ သူ့ရဲ့အောင်ပွဲပါ။ဝါးခယ်မပြည်သူဆေးရုံနှစ်ထပ်ဆောင်အသစ်။အထက ၂ သုံးထပ်ကျောင်းကြီးရွှေသံလွင်ပရိယတ္တိနှစ်ထပ်ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့်သိမ်။ ဒေါ်ပိုက်မိဘိုးဘွားရိပ်သာ။တွေလှူ ခဲ့တယ်။အခန်းအနားပြီးတော့ ကျွန်တော်အစစကူညီတဲ့ အတွက်ကျေးဇူး တင်ကြောင်းလက်ဆွဲ နှုတ်ဆက်တယ်။
၂၀၁၄ခုနှစ်ဆရာကန်တော့ပွဲဝါးခယ်မကိုကျွန်တော်သွားတော့ဆရာနဲ့နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့ရတာပါ။ဆရာက ဝါးခယ်မ အသင်းဂုဏ်ထူးဆောင်နာယက ကြီးအနေ နဲ့ အထက ၁ စာကြည့်တိုက်အလှူ နဲ့ မျက်စေ့ဝေဒနာရှင်များခွဲ စိတ်ကုသပေးဘို့လာတဲ့ အကြောင်းကျွန်တော်ကို
၂၀၁၆ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၆ရက်မနက် ၆နာရီ ၂၅ မိနစ်မှာဆရာကွယ်လွန်ကြောင်းသိရပါတယ်။
မိမိမြို့နယ်အတွက်မေတ္တာ အပြည့်နဲ့လှူ ဒါန်းဦးဆောင်သူ။
ဒါပေမဲ့ ဆရာက ကျွန်တော်ရဲ့
Written by Soe U Soe - May 28 at 2:42pm @ Facebook
ဦးအံ.ကျော် ဆိုသည်မှာ ( သို. ) ၀ါးခယ်မ၏ လမ်းပြကြယ် အတ္ထုပ္ပတ္တိ
သတင်းစာထက်က ၀မ်းနည်းမှတ်တမ်းများနှင်. ရက်လည်မှတ်တမ်း.
ဗိုလ်မှုးကြီးအံ.ကျော် အတွက် ၀မ်းနည်းမှတ်တမ်းများ ( ၁ )
ဗိုလ်မှုးကြီးအံ.ကျော် အတွက် ၀မ်းနည်းမှတ်တမ်းများ ( ၂ )
Posted by မင်းသီဟ (Min Thiha) at 4:18 PM
မိုးယုစံ ရဲ. အချစ်ရေး အိမ်ထောင်ရေး
ဧရာဝတီတိုင်း မှ နာမည်ကျော် နို.တစ်လုံးစိန် နှင်. ဗ...
အမ်အိုင်-၂ ရဟတ်ယာဉ် ပျက်ကျမှု နှင့် သုံးသပ်ချက်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီသစ်ပါတီ ဥက္ကဌဖြစ် ဦးသိန်းညွ...
ဦးသိန်းစ်ိန်၊ဦးရွှေမန်း အားပြိုင်မှုကြားထဲမှာ ညပ်သွာ...
သူသိသော ဆရာမ ဒေါ်မူမူ
အံ့ကျော်ကုန်း တိုက်ပွဲ နှင်. သူသိသော ဒုတိယဗိုလ်မှု...